Beekeeping | December 2019
Hawsha ugu weyn ee dumarka shinni ee qoyska shinni
Shinni waxaa loogu yeeri karaa boqoradda of the rugta. Waxay masuul ka tahay hawlaha ugu muhiimsan ee xaqiijinaya jiritaanka shinniinka oo idil, sii wadida noocyada iyo dayac-tirka awooda farriinta. Qayb kasta oo shaqeynaya ee rugta ayaa mas'uul ka ah hawl gooni ah. Drones waa shakhsiyado rag ah, oo loogu talagalay oo keliya in la sameeyo bacriminta ilmo-galeenka.
Voshchina - Taariiqda Beeswax leh tirooyinka dheeraadka ah ee loogu talagalay dhismaha deg dega ah ee malab. Xaashidan waxaa lagu taagay qaab gaar ah oo lagu rakibay rugta. Naqshadani waxay ka caawisaa ka hortagga gumeysiga shinnida inay ka soo baxaan oo ay gebi ahaanba ku dhajiyaan. Gaaban, malabkii ma aha oo kaliya dammaanad ah goosashada wanaagsan, laakiin sidoo kale damaanad ah caafimaadka ee qoyska shinni.
Waa maxay baakooyinka shinni?
Laga bilaabo inuu ka qaybgalo shinnida, bilawga, sida caadiga ah, ayaa horey u baaraya dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ee mawduucan, iyo su'aasha ugu muhiimsan ee danaynaya waa meesha iyo sida aad u iibsan karto cayayaan malabka. Ilaa hadda, waxaa jira dhowr fursadood oo wanaagsan oo lagu xallinayo dhibaatadan - waxay iibsanaysaa baakadaha shinni, qashin ama qoysaska shinni.
Faa'iidooyinka iyo sifooyinka isticmaalka finan nucleus
Xitaa beeraleyada ugu khibrad badan ayaa ka hadlay ereyga "asalka" had iyo jeer si cad oo aan sax ahayn u sharxi kara waxa uu yahay. Erayga laftiisu waa asal ahaan Latin waxaana loo tarjumay "asal". Tani waa asalka ugu muhiimsan. Nucleus waxaa loola jeedaa nafsadda yar yar, oo gebi ahaanba ku filan, iyada oo ilmo-galeenka iyo shaqaalaha.
Honey ayaa quudin jiray beebka
Bees-ku-tallaaliddu waa geedi socod adag oo u baahan taxadar joogto ah iyo daryeel qiiro leh oo ku saabsan dhirta. Mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee ku saabsan beekeepers, waa quudinta bees ee guga. Dad badan ayaa ka shakisan in ay doortaan - sharoobada sonkorta ama caanaha. Khabiiro khibrad badan leh ayaa ku fekeraya in ay maleynayaan in malabku uu wali ku dhow yahay badeecada dabiiciga ah wuxuuna keenayaa waxtar dheeraad ah cayayaanka.
Waa maxay sababta, goorta iyo sida beesku u soo baxaan. Sidee loo joojiyaa duufaanka shinnida, sawir, video
Wakhti dheer, muusik wuxuu u adeegay nin sida ilaha caafimaadka leh: malab, wax, kalluun, iwm. Intaa waxaa dheer, kaalinta waa weyn sida pollinator dabiiciga ah ee dhirta. Mid ka mid ah dhacdooyinka muhimka ah ee nolosha shinni shinni waa midabkeeda, sidaa daraadeed waa muhiim in la fahmo habdhaqanka geeddi-socodka, iyo sidoo kale in la ogaado sida looga hortago shinnida.
Halkii 10 boorsooyin: sida loo isticmaalo rugta shinni
Beereyaal qibrad leh waxay og yihiin in shinbiraha shimbiraha si fiican loo habeeyey ay furaha u tahay malab firfircoon. Habka caadiga ah ee ururkan ayaa ah xakamaynta safafka. Laakiin si loo hagaajiyo kaabayaasha shinnida iyo kordhinta malabta "dhalidda", waxaa sii kordhaya dhismaha rugta shinnida.
Siyaabaha shinnida boqoradda
Mid ka mid ah xirfadaha lagama maarmaanka ah ee shinnida waa soo saarista boqoradda. In sayniska ee kaydinta kaydka waxaa jira laanta oo dhan loo yaqaan 'Matology'. Aynu eegno hababka jira ee loogu talagalay shinniinta boqoradda oo midkee fududahay inuu u barto kuwa bilowga ah. Shuruudaha aasaasiga ah ee deegaanada shimbiraha Tixgeli habka naftaada ama iibka.
Qaababka naqshadeynta iyo mabda'a ah ee qaliinka miraha granovsky
Qof kasta oo heysta apiary, isla markiiba ama ka dib wuxuu u maleynayaa inuu ku iibsanayo qalab lagu boodayo malab. Ujeedada this, soo saaraha malab granovsky waa ku habboon yihiin yar yar iyo weyn ee apiaries. Waxaa loo isticmaali karaa labada bilowga ah iyo beeraleyaal qibrad leh. Qeexida qalabka Eryaha malabku wuxuu ka kooban yahay cajalado loogu talagalay nooca "Dadan".
Goobaha qibrada leh waxay u noqotay mid aad u caan ah oo lagu soo bandhigo cosmicry. Maxay yihiin sifooyinka habkani iyo faa'iidooyinka malabku soo baxay - hoos lagu sharraxay. Isku xirnaanta shinni-saarida sheyga ilaalinta ee sheyga waa hab qadiimi ah. Tilmaamidu waa in hoyga beesku aanu ahayn rugta caadiga ah, laakiin waa god. Bort waa meel bannaan oo lagu sameeyo qaab gaar ah oo geed ama gogol ah oo u adeegta sidii beehive for bees.
Sida loo sameeyo xarig alpine leh gacmahaaga
Qalab kasta waa inuu abuuraa shuruudaha ugu wanaagsan ee shinnida si ay u noolaadaan una kordhiyaan wax soo saarka. Hawshani waxay kobcinaysaa rugta alpine. Maqaalkani, waxaad baran doontaa waxa "Alpine", oo waxaad sidoo kale ka heli doontaa tilmaamo talaabo tallaabo ah oo sawir ah oo ku saabsan sida aad adigu u samayn lahayd.
Waa maxay cudurada waxaa lagu daaweeyaa shinni ahaan: calaamadaha iyo ka hortagga aponeapyka
Dadka badankood, bees waa xayawaan yar oo dhib badan oo laga ilaaliyo. Laakiin cudurada qaarkood, cayayaanka ayaa si fudud u ah hadiyad samada ka timid. Waa maxay tani? Daaweeyn, ama "daaweyn shinni ah" (laga bilaabo erayga Laatiinka, macneheedu waa "shinni"), waa daaweyn kale oo la isticmaalayo alaab xoolo kala duwan, sida feeraha shinbiraha lagu mudo, isticmaalka manka, jelly boql, propolis iyo wax.
Marxaladaha horumarinta dirxiga shinni
Aqoonta shuruucda aasaasiga ah ee taranka laga helo ayaa faa'iido u leh labada beelood ee qibrada leh iyo kuwa jacaylka ah. Taas oo aan, goosashada wanaagsan oo la iloobi karo. Aan tixgelinno marxaladaha ugu muhiimsan horumarinta cayayaankaan ka yimaada ukunta ilaa qaangaarka. U fiirsashada dirxiga maqaarka ma aha mid la mid ah cayayaanka qaangaarka ah, waana mid ka duwan kan ka duwan, sida balastar laga soo saaro rater.
Waa maxay nacnac for bees iyo sida loo kariyo guriga?
Tayada nafaqada waa mid ka mid ah dhinacyada muhiimka ah ee kaydsiga, sidaas darteed, khabiiro khibrad leh ayaa isticmaala quudinta Candi sidii cunto dheeraad ah oo loogu talagalay shinni, taas oo looga doodi doono qodobkan. Aan eegno sida ugu habboon ee loo sameeyo Candi. Maxay tahay? Marka hore, aynu eegno waxa uu Candi yahay. Cajiideedka, candi waa hamuun ka kooban sonkor, malab iyo biyo.
Noocyada content of bees iyo wax soo saarka madaxbanaan ee rugta Varre
Marxaladda hadda jirta ee horumarinta beeraha, arrinka wax soo saarka malabku waa mid miisaaman, sidaa daraadeed, waxa habboon in la hagaajiyo habka loo marayo guryaha oo aan loo dhigin tiknoolajiyada abuuritaanka rugta. Guri sahlan oo la dhisi karo oo gurguuran oo sahlan ayaa siin doona cayayaanka xaalado raaxo leh oo lagu ururinayo malab.
Beeraha loo yaqaan "Breeding Bees"
Sababo badan awgood, qeybinta dabiiciga ah ee deegaanada shinniinka had iyo jeer looma aqbalo beekeeper. Waxaa macquul ah in si dhammaystiran loo xakameeyo geeddi-socodka iyo, haddii loo baahdo, qabanqaabiyaan foorno ficil ah. Aynu isku dayno inaanu ogaanno sida loo sameeyo. Sharaxaad Waa suurtagal in la sameeyo qoys cusub oo shimbir ah labadaba qoysaska oo buuxa iyo caawimada t.
Faa'iidooyinka isticmaalka finanka "boa"
Beekeeping waa waxqabadyo xiiso leh oo ka soo baxa hiwaayad iyada oo ah isha dhaqaale ee dakhliga. Si kastaba ha noqotee, qof walbaa kuma shaqeyn karo shinni iyo inta badan si uu u kasbado. Waxay u baahan tahay aqoon culus, waayo-aragnimo ballaaran, qofku waa inuu si daacad ah u jecel yahay shaqada uu ku shaqeynayo, oo muhiimad ahaan leh, xoogaa jireed jir ahaan, tan iyo qalabka garoomada iyo qalabka, iyo sidoo kale alaabooyinka dhabta ah soo saaray, waxay leeyihiin miisaan wanaagsan.
Adiga laftigaaga: Nidaamyada samaynta qulqulka
Qaar badan oo beeraley ah oo khibrad badan leh oo haysta carqalado badan, ayaa muddo dheer si firfircoon u isticmaalay qalab noocyo kala duwan ah si ay u fududeeyaan shaqadooda iyo waxtarka weyn ee ganacsiga kaydsiga. Marka lagu daro waxay isticmaalaan wiishka gaarka ah (garabka "apiary"), ama si kale loo dhigo.
Beekeeping weli wali ma istaagin, marmarna waxay soo bandhigaysaa qaar ka mid ah isbeddelada cusub ee u oggolaanaya in beesku abuuro xaalado badan oo raaxo leh shaqada iyo horumarka, iyo milkiilaha dugsiga, isla mar ahaantana, fududeeyee oo yareeya shaqooyinka maalinlaha ah. Mid ka mid ah horumarinta xiisaha leh waa habeynta taakuleynta ee shinnida nooca Berendey.
The taranta ee gumeysiga shinni ah: habka dabiiciga ah
Maanta, ku dhowaad kasta apiary shimbir waaweyn ma isticmaali hababka dabiiciga ah ee shinnida taranta. Qaababka noocan oo kale ah ayaa dib loo dhigay, waxay keenaan waxyaabo badan oo khasaaro ah iyo dhibaatooyin loo haysto beero. Waxaa intaa dheer, sababaha iyo habka ay udilaacda shinnida weli wali si faahfaahsan looma baarin oo su'aalo badan laga helo takhasusle. Qodobkan waxaan ku sheegi doonaa sida ugu macquulsan ee looga hadlayo mabaadiida cayayaanka iyo taranka qoyska dhexdiisa, iyo sidoo kale sida loola macaamilayo iyo hatching, nadiifinta iyo beeritaanka roogga wuxuu ka dhacaa rugta.